kasper 2011 အမှန်အကန် license key ပါဗျို. . . . — MYSTERY ZILLION
kasper 2011 အမှန်အကန် license key ပါဗျို. . . .
July 2010 edited July 2010 in Sharing
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ၀ယ်ထားတာပါဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဒီကီးကို သူငယ်ချင်းငါးယောက်ကိုပေးထားတာ သူတို.လည်းအင်တာနက်ချိတ်ပြီး update လုပ်နေတာပဲ blacklist မဖြစ်ဘူးဗျ။ အဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာ၃လုံးကို ဒီကီးတစ်ခုထဲနဲ. စမ်းကြည့်တာကြ မောင်မင်းကြီးသားတွေက တန်းသိတယ်ဗျာ။ လိုင်စင်က 1 user ပဲရတာကို မင်းက ၃လုံးသုံးတဲ့အတွက် စာချုပ်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး ၃လုံး လုံး blacklist ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာ။ အဲဒါနဲ.ကျွန်တော်လည်း ကီးကို ၁လုံးထဲပဲတင်ပြီးကျန်တဲ့၂လုံးကို ပြန််ဖြုတ်ပြီး အင်တာနက်ပြန်ချိတ်ကြည့်တာ ပြန်ပြီးကောင်းနေပြန်ရော ကီးက အံ့ရော အံ့ရော။
အင်တာနက်ချိတ်ပြီးသုံးတာ IP တူနေရင်သာ မောင်မင်းကြီးသားတွေက တန်းသိတာ IP မတူတဲ့ကျွန်တော့်ဘော်ဒါတွေကြ automatically တောင် update လုပ်ထားသေးသဗျာ ဒီနေ.ထိဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ နှစ်၀က်သာကျိုးလာတယ်။အဲဒါကြောင့် ရှယ် update လုပ်လို.ရတယ်လို.ပြောတာပါဗျာ။ Networking ကျွမ်းတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လည်းလို.ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဒီကီး လက်ကျန်သက်တမ်း၅လ ကုန်သွား၇င်လည်း မပူပါနဲ. ကျွန်တော့မှာ license key တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။မနေ.ကမှ အလကားနီးပါးရထားလို. တင်ပေးဦးမှာ . . .
ဘာလို.လည်းဆိုတော့ ဘော်ဒါတယောက်က kaspersky company ကလေ ဟိဟိ။ နာမည်ပြောလိုက််ရင်တော့ ဒင်း အလုပ်ပြုတ်မှာသေချာတယ် ဟဟ။
အစ်ကိုတို.ရေ ကျွန်တော်၀ယ်ထားတဲ့ license အမှန်အကန် key လေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျို. . . ကြိုက်သလောက် update လုပ် blacklist မဖြစ်ဘူးဗျို. . .
ငါးလကျော်ကျန်သေးတယ် သက်တမ်းက . . .
2011 update လိုချင်ရင်တော့ လှည်းတန်းက Software League မှာ Free လာယူကြပါဗျို. . .
အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ. . .
Kaspersky 1 user License Key ကို ကျနော် စက်သုံးလေးလုံးပေါ်မှာတင်ပြီး စမ်းဖူးပါတယ်။ Black List မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်ယူဆတာကတော့ .... Update တပြိုင်နက်ထဲမလုပ်ရင် Black List မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေ Example - ပထမစက်မှာတင်တယ်။ ဖြုတ်ပြီး ဒုတိယစက်မှာတင်တယ်။ ပြန်ဖြုတ်ပြီး တတိယစက်မှာတင်တယ်။ ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပထမစက်မှာပြန်တင်တယ်။
Kaspersky Lab ကအဲလိုယူဆပုံရပါတယ်။
စက်အများကြီးမှာတင်လိုက်ပေမဲ့ Update လုပ်ချိန်မတူတဲ့အခါမှာ အဲလိုယူဆတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စက်အများကြီးမှာတင်ပြီး တပြိုင်နက် Update မလုပ်ဖူးတဲ့အတွက် ကျနော့်ယူဆချက်ဟာ မှန်းဆချက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး 50% သာမှန်ကန်နိုင်ပါကြောင်း ...............
sayarchit wrote: »
နောက်ဆို Kaspersky License ၀ယ်ဖို့စဉ်းစားရတော့မယ် .... :39: :71:
Thankalot.<br>